Myths and Facts about Menstrual Cup - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရာသီသုံးခှကျ( Menstrual Cup ) နဲ့ ဒှီဟမြားကြှနျမတို့ မိနျးကလေးတှဟော အထူးအဆနျး စူးဆနျးတာဝါသနာပါပမေယျ့အရာရာကို ပူပနျတတျတဲ့ စိတျလေးလညျးရှိတတျကွပါတယျ။ကိုယျသုံးလမေ့ရှိတဲ့ အသဈအဆနျးဆို သခြောသိအောငျလုပျပွီးမှ သုံးတတျကွတာမို့ ခု Menstrual Cup နဲ့ ပတျသကျတဲ့ဒှီဟလေးတှအေကွောငျးပွောပွခငျြပါတယျ။
– Menstrual Cup က ရာသီသှေးမြားတဲ့ အခြိနျဆို သုံးမရဘူးဆို?
မှားပါတယျ။ Menstrual cup ဟာ အရညျ ၁အောငျစထိ ထိနျးသိမျးနိုငျပါတယျ။ဒါဟာ Tampon တို့ Pad တို့ထကျ ၂ဆလောကျသိုလှောငျနိုငျတာပါ။
– Menstrual Cup သုံးရငျ အနံ့ဆိုးတှေ ထှကျနိုငျလား?
မထှကျနိုငျပါဘူး။ ရာသီသှေးဟာ ပွငျပလနေဲ့တှမှေ့ အနံ့အသကျထှကျတတျတာမို့ Menstrual cup က ပွငျပလနေဲ့မထိတှစေ့လေို့မပူရပါဘူး။
ပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျတဲ့ Reusable Cup ဆို တအားတနျပါတယျ။ တဈခြို့ဆိုနှဈအတျောကွာသုံးလို့ရလို့ တဈလဆီတှကျကွညျ့ရငျ တနျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ Tampon တို့ pad တို့ဆို ခဏခဏ လဲရတာမို့ ပိုတောငျ အကုနျအကမြားပါတယျ။
Tampon နဲ့ ယှ၊ျရငျပိုးဝငျနိုငျခွနေညျးသလိုPad နဲ့ယှဉျရငျလညျး အသားပှနျးနိုငျခွနေညျးပါတယျ။
– ကိုယျနဲ့အဆငျပွတေဲ့ Size ရှာရမယျဆိူ?
ဟုတျပါတယျ။ တဈခြို့ဆိုသခြော ကိုယျနဲ့ကိုကျညီအောငျရှေးတာတောငျအဆငျမပွတောမြိူးရှိနိုငျပါတယျ။
– သားအိမျသားဆကျခွားပစ်စညျး IUD နဲ့တှဲမသုံးရဘူးဆို?
ဟုတျပါတယျ။ Menstrual cup လေးထုတျတဲ့အခြိနျ IUD ကွိုးကို ဆှဲမိသလိုဖွဈစလေို့IUD ထညျ့ထားရငျတော့ မသူံးပါနဲ့လို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။မိနျးကလေးတိုငျး ပြျောရှငျတကျကွှစှာနရေ့ကျတိုငျးဖွတျသနျးနိုငျပါစလေို့။
ရာသီသုံးခွက်( Menstrual Cup ) နဲ့ ဒွီဟများကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အထူးအဆန်း စူးဆန်းတာဝါသနာပါပေမယ့်အရာရာကို ပူပန်တတ်တဲ့ စိတ်လေးလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်သုံးလေ့မရှိတဲ့ အသစ်အဆန်းဆို သေချာသိအောင်လုပ်ပြီးမှ သုံးတတ်ကြတာမို့ ခု Menstrual Cup နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဒွီဟလေးတွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
– Menstrual Cup က ရာသီသွေးများတဲ့ အချိန်ဆို သုံးမရဘူးဆို?
မှားပါတယ်။ Menstrual cup ဟာ အရည် ၁အောင်စထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ Tampon တို့ Pad တို့ထက် ၂ဆလောက်သိုလှောင်နိုင်တာပါ။
– Menstrual Cup သုံးရင် အနံ့ဆိုးတွေ ထွက်နိုင်လား?
မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ရာသီသွေးဟာ ပြင်ပလေနဲ့တွေ့မှ အနံ့အသက်ထွက်တတ်တာမို့ Menstrual cup က ပြင်ပလေနဲ့မထိတွေ့စေလို့မပူရပါဘူး။
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Reusable Cup ဆို တအားတန်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုနှစ်အတော်ကြာသုံးလို့ရလို့ တစ်လဆီတွက်ကြည့်ရင် တန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Tampon တို့ pad တို့ဆို ခဏခဏ လဲရတာမို့ ပိုတောင် အကုန်အကျများပါတယ်။
Tampon နဲ့ ယှ၊်ရင်ပိုးဝင်နိုင်ခြေနည်းသလိုPad နဲ့ယှဉ်ရင်လည်း အသားပွန်းနိုင်ခြေနည်းပါတယ်။
– ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ Size ရှာရမယ်ဆိူ?
ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုသေချာ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ရွေးတာတောင်အဆင်မပြေတာမျိူးရှိနိုင်ပါတယ်။
– သားအိမ်သားဆက်ခြားပစ္စည်း IUD နဲ့တွဲမသုံးရဘူးဆို?
ဟုတ်ပါတယ်။ Menstrual cup လေးထုတ်တဲ့အချိန် IUD ကြိုးကို ဆွဲမိသလိုဖြစ်စေလို့IUD ထည့်ထားရင်တော့ မသူံးပါနဲ့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။မိန်းကလေးတိုင်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာနေ့ရက်တိုင်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့။